राप्रपामा ‘अपहरण’मा केन्द्रीय नेता, पार्टी फुटाउन देउवाको सहयोग ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
राप्रपामा ‘अपहरण’मा केन्द्रीय नेता, पार्टी फुटाउन देउवाको सहयोग !
काठमाडौं । पार्टी विभाजन भएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गोप्य बैठक बोलाएका छन् । राणाको नयाँ पार्टी खोल्ने योजना विफल बनाउन उनले राणाको पक्षमा रहेका भनिएका केन्दैीय सदस्य र सांसदहरुलाई तान्न नयाँ रणनीति लिएका छन् । स्रोतका अनुसार राणााले नयाँ पार्टीको मान्यता पाउनुअघि नै ४० प्रति पुग्न नदिने र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेर सरकारमा जाने विषयमा सहमति गर्ने तयारी गरेका छन् । बिरिष्ठ नेता पशुपति समशेर राणाले पार्टी फुट्नु अगाडी नै सरकारमा जाने विषया ‘ज्वाई’ शेरबहादुर देउवासँग सहमति गरि सकेका छन् । अध्यक्ष थापाले हिजो बुझाएको हस्ताक्षर नक्कली भन्दै आज आयोगका अगाडी नै हस्ताक्षर गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
आज उनले हस्ताक्षरमा संलग्नहरुको विज्ञप्ती निकाल्ने तयारी गरेको उनी निकटका एक नेताले बताए । वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाले आफ्नै अध्यक्षतामा २२ जना सांसदसहित नयाँ पार्टी निर्वाचन आयोगमा आइतबार दर्ता गरिसकेका छन् । राणाको पार्टीको नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक राखिएको छ । एक भएको ६ महिनालगत्तै राप्रपा दुई चिरा भएको हो ।
करिब २ महिनादेखि नै यो पार्टीमा सरकारमा जाने नजाने र संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिनेरनउभिने भन्नेमा तीव्र विवाद थियो । त्यसबारे पुष्पकमल दाहाल सरकारले संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा राप्रपाकै १० सांसदले असन्तुष्ट भई बैठक बहिष्कार गरेका थिए । राणा पक्षले अध्यक्ष थापाले केही नेताको अपहरण गरेको दावी गरेको छ ।
‘दैलेखका नेता शोभा शाहीसहित केहीको अपरण गरेको छ’ राणा पक्षका एक नेताले नेपालपाटीलाई भने ‘जे गरेपनि अब थापा राप्रपामा नै अल्पमतमा परेका छन् नयाँ पार्टी नयाँ हैसियतमा देखिनेछ ।’ थापा पक्षले राणाले पैसामा केन्द्रीय सदस्य किनेको आरोप लगाएको छ । थापा पक्षका केन्द्रीय सदस्य दिलनाथ गिरीले धेरै केन्द्रिय सदस्य र सासंदले पैसाको प्रस्ताव अस्विकार गरेको तर केही भने पैसामा किनिएको गिरीले आरोप लगाए । ‘हामीसँग प्रमाण छ, आबश्यक परे त्यो प्रमाण दिन तयार छौ’ गिरीले भने । थापा पक्षले पार्टी फुटाउन सरकारी पक्ष खारसरी प्रधानमन्त्री देउवाले सहयोग गरेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
3711 पटक पढिएको